မောင်တော တွင် လူ ရာနှင့် ချီ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ | စစ်တွေ တွင် အကြမ်းဖက်ရန် လို မှုများ ဆက်လက်ရှိနေ | The FNG
June 9, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
စစ်တွေ မြို့ တွင် ကျောင်းများ ပိတ်ထား ပြီး ၊ ဈေးများ လည်း ပိတ်ထား သည် ဟု သိရသည်။
မောင်တော မြို့ နယ် တွင် မူ နေအိမ် အလုံး ၆၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီး ခံရ ပြီး ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်
သူများ မှာ အစိုးရတပ် ဖွဲ့များ က နှိမ် နှင်း စဉ် တစ်ဖက် နိုင်ငံ သို့ပြေးဝင် ခိုလှုံ ပြီး နောက် ပြန်
လည် ပြီး လူစု ၀င်ရောက် ကာ တိုက်ခိုက်မှု များ ရှိသည် ဟု သိရသည်။
ယမန့် နေ့က ရိုဟင်ဂျာ တို့၏ အကြမ်းဖက် မှု ကြောင့် မောင်တော မြို့ နယ် တစ်ခု တည်း မှာ ပင်
ရခိုင် လူမျိုး အနည်း ဆုံး လေးဆယ် ကျော် သေဆုံး ပြီး ၃၀၀ ခန့်ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ သည် ဟု သိရ
ရန်ကုန် မြို့တွင် မူ ယနေ့ နေ့ လည်က ရခိုင် ဒေသ တွင် အကြမ်းဖက်ခံ ရသည့် မြန်မာ တိုင်း ရင်း
သား များ ရန်ကုန်မြို့ ရောက် ရခိုင် နှင့် မြန်မာ တိုင်း ရင်းသား များ က ဆုတောင်း မှု ပြု ခဲ့ ကြ ပြီး
ရိုဟင်ဂျာ များ ၏ အကြမ်းဖက် တိုက် ခိုက်မှု များ ကို ရှုံ ချ ကန့် ကွက်ခဲ့ ကြသည်။
နောက်ဆုံး ရသတင်းများ အရ မောင်တော မြို့ နယ် တွင် အစိုး ရ စစ်တပ် များ ၀င်ရောက် တပ်
စွဲထား သော် လည်း ဒေသခံ ၅၀၀ ခန့် ပျောက် ဆုံး လျှက် ရှိ ပြီး ထို အထဲ တွင် ပြောင်းရွှေ့ တာ
၀န်ထမ်းဆောင် သည့် ၀န်ထမ်းများ နှင့် အစိုးရ မဟုတ် သော အဖွဲ့အစည်း များ ၊ အကူအညီ
ပေး ရေး ဧဂျင် စီမှ ၀န်ထမ်းများ လည်း ပါဝင် သည် ဟု စစ်တွေ မြို့မှ ကျောင်းဆရာ ဟောင်း
တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးမောင်ကျော်ဇံ က FNG သို့ပြောသည်။
ယနေ့ည ၉ နာရီ နောက်ဆုံး သိရသည့် သတင်းများ အရ ဘင်္ဂါ လီ ရိုဟင်ဂျာ တို့က ရခိုင်
လူမျိုး တို့၏ ကျေး ရွာ များ ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး မှု များ ဆက်လက် ပြုလုပ် နေပြီး ရခိုင် တိုင်း ရင်း
သား တို့က သံ ချောင်း ခေါက်ကာ စုဝေး မှု များ ပြု လုပ် ပြီး ဘင်္ဂါ လီ တို့၏ ရန်ကုန် ကာ ကွယ်
စစ်တွေ မြို့စွန် ရှိ ဘင်္ဂါလီ အများစု နေထိုင်ရာ ဘုမေ ရပ်ကွက် တွင် ရိုဟင်ဂျာ များ သည် မြို့ 
တွင်း ရခိုင် လူမျိုး များ နေထိုင်ရာ ရပ် ကွက် များ သို့ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစား မှု ကြောင့် ရဲတပ်
ဖွဲ့နှင့် ရခိုင် ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများ က သေနတ် ပစ်ဖောက် တားဆီး နေရာသည်။
: စစ်တွေ မြို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် သမား များ ၏ ရန် ကို ကာကွယ်ရန် ရခိုင် လူမျိုး များ
ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သည့် ရခိုင် မျိုးချစ်ပြည်စောင့် တပ် (ပြည့်သူ့ စစ်) ကို လောက မာရဇ္ဇိန် ဘုရားဉ်
ယနေ့ည ၉ နာရီ တွင် ဖွဲ့ စည်း လိုက်သည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။ အဆိုပါတပ်
ကို စစ်တပ် မှ လက်နက် များ တပ် ဆင်ပေး သည် ဟု သတင်း ရရှိ သော်လည်း အ
တည်ပြု နိုင်သေးခြင်း မရှိပါ။
ယနေ့ည ၈ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့် က ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမား ၃၀၀ ခန့် က စစ်တွေ မြို့အား မီးပေး
နေသည့် မီးစက် ကို မီးရှို့ ဖျက် ဆီး ရန် ကြံ စည် ခဲ့ ရာ လုံခြုံ ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ က သေနတ်ပစ်
ဖောက်ပြီး ဟန့် တား ခဲ့ ရသည် ဟု သိရသည်။
Photo Credit : Hmuu Zaw
← စစ်တွေ မှာ GTC ကျောင်းသား တစ်ဦး အသတ်ခံရ
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၁၁.၆.၁၂ ) မှ ( ၁၇.၆.၁၂) ထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း →
5 responses to “မောင်တော တွင် လူ ရာနှင့် ချီ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ | စစ်တွေ တွင် အကြမ်းဖက်ရန် လို မှုများ ဆက်လက်ရှိနေ”
မသိသူ June 11, 2012 at 6:30 pm · ·
အဆိုးတဲ့ကအကောင်းပေါ့ မြန်မာအစိုးရအသစ်လက်ထက် မှာဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးဟာ
ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု့ ရှိတယ်ဆိုတာ သိရတော့မှာပေါ့၊ကလားတွေက ရခိုင်တွေကို ပြစ်မှားမိတယ်ဆိုရင်လည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ဖို့ ၊အော်…..ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက် ဖြစ်ရင်စစ်တပ်မှ ပြန်လည်အုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်နော်…….အဲါးတော့မမေ့ကြပါနဲ့!
sagar June 12, 2012 at 1:41 pm · ·
jungle June 11, 2012 at 4:41 pm · ·
Myat Noe June 10, 2012 at 8:34 am · ·
အမလေး ရက်စက်လိုက်ကြတာ ရက်စက်လိုက်ကြတာ နင်တို့လက်တစ်ကမ်းမှာရှိနေတာ နင်တို့ ဖအေမဟုတ်ဘူး ပထွေးအမှတ်နဲ့ သတ်ကြပါလား နင်တို့ အဲလိုလုပ်နေလို့ ငါတို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်တာ အသုံးမကျတဲ့ တပ်မတော် အသုံးမကျတဲ့ အစိုးရ သံဃာတွေကိုကျတော့ ပစ်မိန့် ပေးတယ် ကုလားတွေကိုကျတော့ အပေါ်ထောင်ပစ်တယ် အပေါ်ထောင်ပစ်တာ ကြောက်နေလို့ လား
Kyaw Zin Oo June 10, 2012 at 2:06 am · ·
Sad to see Dr. Khin Maung Latt’s photo( The standing gentleman in white shirt) in blood soak.